Waqtiga Ay Barcelona Saxaafada & Taageerayaasheeda U Soo Bandhigayso Heshiiska Frenkie de Jong Oo La Shaaciyay. - Gool24.Net
Waqtiga Ay Barcelona Saxaafada & Taageerayaasheeda U Soo Bandhigayso Heshiiska Frenkie de Jong Oo La Shaaciyay.
Kooxda Barcelona ayaa bishii January si layaableh ugu guulaysatay tartankii kooxaha Yurub ugu waa wayni ku doonayeen saxiixa Frenkie de Jong kaas oo ay 75 milyan yuro ka bixiyeen laakiin iyada oo De Jong uu helay fursada uu amaah ugu sii joogay kooxdiisa Ajax waxa uu hadda si rasmi ah ugu biiri doonaa Blaugrana.
Markii heshiiska Frenkie de Jong lagu dhawaaqay bishii January waxay Barcelona cadaysay in xidiga reer Holland uu kooxdeeda soo gaadhayo July 1, laakiin hadda waxaa la shaaciyay waqtiga De Jong loo soo bandhigi doono saxaafada iyo taageerayaasha Barca.
Heshiiskii kooxaha Barcelona iyo Ajax ee Frenkie de Jong ayaa caawa ku dhamaanaya in uu soo dhamaystay xili ciyaareedkii 2018/19 iyada oo June 30 uu si rasmi ah u soo dhamaaday kala wareega xisaabeed ee xili ciyaareedkii hore iyo kan cusub ee laysku diyaarinayo.
Wargayska Sport ee magaalada Barcelona ka soo baxa ayaa lagu shaaciyay in Frenkie de Jong saxaafada loo soo bandhigi doono July 5 oo ku beegan maalinta jimcaha markaas oo ay ilwareedyo sheegeen in uu yahay wwaqtiga ugu haboon ee ay Barca xidigan soo bandhig doonto.
Haddii aanu wax isbadal ahi ku iman qorshaha loo dhigay Frenkie de Jong, waxa uu Camp Nou soo gaadhi doonaa July 4 markaas oo uu sawirada ugu horeeya ku gali doono goobta uu ku riyoodo in uu ka ciyaaro halkaas oo sidoo kale la filayo in uu kalmadaha ugu horeeya ka jeedin doono.
Waxa uu kadib Frenkie de Jong mari doonaa tijaabada caafimaadka wuxuuna jimcaha July 5 uu markii ugu horaysay soo gali doonaa Camp Nou halkaas oo uu kaga soo hor muuqan doono saxaafada iyo taageerayaasha Barca ee imaatinkiisa sida wayn u sugaya.
Barcelona ayaa Camp Nou u furi doonta albaabada si ay taageerayaasha kooxdeedu si buuxda uga soo qayb galaan, wuxuuna kadib Frenkie de Jong qaban doonaa shirkiisa jaraa’id isaga oo ah ciyaartoy Barcelona ah.
Frenkie de Jong ayaa soo qaatay xili ciyaareed layaableh wuxuuna hadda diyaar u yahay in uu talaabo u qaado waayihiisa ciyaareed ee Barcelona halkaas oo uu ka mid noqon doono shaxda Valverde uu ku shaqayn doono.
Ciyaartoyda Barcelona ayaa xarunta tababarka ka soo xaadiri doona July 14 markaas oo uu Frenkie de Jong fursad u heli doono in uu la kulmi doono ciyaartoyda kooxdiisa cusub oo ay ka maqnaan doonaan xidigo muhiim ahi.